China 1325 disc tool atc cnc rawụta ụlọ ọrụ na ndị rụpụtara | JCUT
Lọ ọrụ na-arụ osisi: ụdị ụzọ niile, Windows, igbe, ọrụ aka osisi, ibo ụzọ enweghị agba, enyo enyo, Windows na-akwado ọrụ, usoro ebili mmiri na arịa ndị ọzọ, nhazi osisi. Industrylọ ọrụ mgbasa ozi: ihe ịrịba ama nke mgbasa ozi, mmepụta ihe ịrịba ama, ịkpụ ihe mgbasa ozi, ịkpụzi rọba, ọkụ ọkụ LED neon ọkụ na ihe ndị ọzọ na-ekwupụta ngwaahịa ịchọ mma.
Nkọwa nke igwe
1. Nnukwu arụmọrụ:otutu ihe eji emeghari ahihia na aru oru n’otu oge, nwere ike mezue nhazi ngwa ahia buru ibu. Mmemme mgbanwe akpaka ngwa ngwa, enweghị aka ntuziaka, a na-eme ihe omume ahụ na-akpaghị aka. Iji tebul tebul teknụzụ ikuku teknụzụ emeela emepe emepe emepe emepe eme ihe, na-enwe plọg oghere nwere ikike adsorption siri ike, imewe akụkụ anọ, adsorption nke akụkụ dị iche iche, na-eme ka arụ ọrụ dị mma.
2. speedsọ ọsọ ọsọ: ụzọ abụọ ahụ bụ ntụgharị okpokoro, nnukwu ọsọ, arụmọrụ dị elu, ọsọ traktị gaa na 120000MM / MIN.
3. Ọsọ ọsọ na-agba ọsọ: ojiji nke elu na-agba ọsọ stepper moto na mbanye, Y axis USES okpukpu abụọ draịvụ, elu nkenke mbanye mbanye, na ike ịkpụ mkpịsị aka iji mee ka ebupụta ngwa ngwa.
4. Ezigbo ọrụ: esitela n'okporo ụzọ ndu dị larịị, ahịrị abụọ na ahịrị anọ nke ihe ngosi bọọlụ, nnukwu ike, ọrụ dị mma, nkenke dị elu, ogologo ndụ, ezigbo ebubata bọọlụ bọl, ịkpụ ọfụma.
5. Njikwa ọgụgụ isi: ịnabata sistemụ nchịkwa kọmputa nke nnukwu kaadi kaadị (DSP off-line management system system bụ nhọrọ), yana ọrụ nke nkwụsịtụ, ịgbanye ike, ngwa ọrụ na ịkwa akwa, na nnukwu nkwụsi ike na arụmọrụ dị elu, ma dịkwa mfe mmụta.
6. isionkpụrụ dị elu: algorithm ahụ dị elu nke ọnụọgụ atọ nwere ike ijide n’aka usoro ịgba ọsọ ọsọ na izi ezi, yana enwere ike dakọtara na sọftụwia ụlọ na nke mba ọzọ (dịka: MasterCAM, Type3, UG, AutoCAD, ArtCAM, Proe, JDpaint) na ndị ọzọ.
7. Sturdy na inogide: a na-agbadobe akwa ụlọ nke akwa ahụ, igwe siri ike, nnukwu ike, na -agagharị agagharị, ogologo oge arụmọrụ dị elu na-enweghị nrụrụ, enweghị mmegharị.Gantry ije, na-ewusi tebụl ike, nwere ike ịbụ usoro aka ike nke ihe dị na tebụl ọrụ, ike na inogide.
Workinglọ ọrụ ndị e ji osisi rụọ: ụdị ọnụ ụzọ niile, Windows, igbe, osisi e ji osisi rụọ, ọnụ ụzọ enweghị agba, ákwà ngebichi, Windows na-akwado fan, nhazi efere na ngwa ndị ọzọ, nhazi osisi.
Ụlọ ọrụ mgbasa ozi: Mgbasa ozi mgbasa ozi, ihe ịrịba ama, mmepụta ihe mpempe mgbasa ozi, ịkpụzi rọba, ihe eji emepụta ọkụ, neon ọkụ na ihe ndị ọzọ na-ekwupụta ngwaahịa ịchọ mma.
Artslọ ọrụ nka na nka: nwere ike ịbụ na osisi, achara, mabulu, osisi osisi, bọọdụ agba abụọ, kristal na ihe ndị ọzọ maka ọtụtụ usoro dị mma na ịkpụ ederede.
Ihe omume: Ngwurugwu osisi di iche iche; Efere alumini, efere plastic nke alumini, efere plastic; PVC, acrylic, bọọdụ ụcha abụọ, bọọdụ njupụta, bọọdụ kristal na ihe mgbasa ozi ndị ọzọ; Ya na mabri wuruwuru na ihe ndi ozo edoghi aru na ihe di egwu.
Ngwunye Ngwakọta Ngwakọta R7 ATC CNC CNC
Mpaghara Ọrụ (X * Y * Z) 1300MM * 2500MM * 200MM
Gbasaa 9kw GDZ ATC spindle
Akwukwo oru Lọ ọrụ 12 servo disk auto tool changer magazine nwere ihe mmetụta ihe eji eme ihe
Ọgbọ Yaskawa Japan 850w servo moto
Ọkwọ ụgbọ ala Yaskawa Japan 850w servo
Linear okporo ụzọ X, Y, Z axis nakweere okporo ụzọ Hiwin Linear 25, mgbidi n'akụkụ
Z axis Z axis TBI -2510 bọl bọl
Usoro njikwa Usoro njikwa Syntec 6MB
Mbelata Japan Shimipo reducer
Tebụl igwe Tebụl friji nwere mpaghara isii, mgbapụta 7.5kw / 380
Onye na-anakọta uzuzu 4kw / 380v
Chọta ọrụ Ọrụ aka nri akụkụ aka nri + ihe ihe na-adọrọ adọrọ
Ahụ igwe Nnukwu igwe igwe 3,5, ihe owuwu metal metal na nnukwu gantry
Nha ịbụ 2700kg
Nke gara aga: Igwe igwe Atc
Osote: Abụọ ngbanye igwe kwụ ọtọ igwe cnc rawụta
Atọ isi Atc Cnc Router
Anọ ra mkpịsị igwe anọ atc cnc
Abụọ ngbanye igwe kwụ ọtọ igwe cnc rawụta